ရုရှားမြေမှာ ပြန်လည်ရှာဖွေရမယ့် အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားအိပ်မက်
(၅၂)နှစ်ကြာ မက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားအိပ်မက်ကို အင်္ဂလန်အသင်း ပြန်အသက်သွင်းနိုင်မလား
5 Jul 2018 . 5:09 PM
ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘိုးအေလို့ တင်စားခံထားရတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း ဘောလုံးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ အောင်ပွဲနဲ့ ဝေးကွာနေတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမက ကြာမြင့်နေပြီ။ တိတိကျကျပြောရရင် ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလ်စွဲပြီးကတည်းက အဓိက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ အင်္ဂလန်အသင်းက ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်သလောက် ပြန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် အမြဲလိုလိုဗိုလ်စွဲဖို့ရေပန်းစားပေမယ့် အဖျားရှုးသွားပြီး နာမည်ကြီးထမင်းငတ်အသင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်နာနာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း ဒီတစ်ကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ သမိုင်းသစ်တစ်ခုရေးထိုးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သန်းနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ဆိုတာက ခြေစွမ်းက အဓိကကျတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကံတရား၊ ဗိုလ်လုပွဲသွားရာလမ်းကြောင်းချောင်မှု စတဲ့အချက်တွေကလည်း အရေးပါတယ်ဆိုတာ မေ့ထားလို့ မရဘူး။ အခု အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းက အကောင်းဆုံးအနေအထား မဟုတ်ပေမယ့် အရင့်အရင်အသင်းတွေထက် Team Work ၊ Performance က တိုးတက်မှုရှိလာတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဗိုလ်လုပွဲသွားရာလမ်းကြောင်းကို ကြည့်ရင်လည်း ကိုယ်နဲ့ Level တူ အသင်းတွေနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲရောက်မှ ဆုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်း အားသာနေတယ်။ တစ်ခုပဲ။ ကံတရားက အင်္ဂလန်အသင်းဘက်မှာ ရှိလား၊ မရှိလားဆိုတာ။
ဒီလိုလမ်းကြောင်း ချောင်ခဲ့တာကလည်း အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ပါးနပ်မှုကြောင့်ပါပဲ။ အုပ်စုတွင်း (၂)ပွဲကစားပြီးချိန် အင်္ဂလန်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းတို့ အမှတ်၊ ရဂိုးပေးဂိုး အကုန်တူညီနေတာကြောင့် သရေကျမယ်ဆိုရင် Fair Play Points အရ အင်္ဂလန် သေချာပေါက် အုပ်စုပထမရမှာ။ နောက်ဆုံးပွဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာက အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ကောင်းဖို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲအထိ လမ်းကြောင်းချောင်သွားခဲ့တယ်။ အခု ကွာတားဖိုင်နယ်အဖြစ်ကစားမယ့် ဆွီဒင်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင် ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ရုရှား-ခရိုအေးရှားတို့က တစ်သင်းနဲ့တွေ့မယ်၊ တကယ်လို့ တခြားလမ်းကြောင်းက ပြင်သစ်၊ ဘရာဇီးလ်တို့သာ ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဥရုဂွေး ဘယ်အသင်းကိုမဆို အင်္ဂလန်အသင်း ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်မယ့်အနေအထားပဲ။ သေချာတာကတော့ အင်္ဂလန်အသင်း ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်ဖို့ရယ်၊ ကံတရားသာ လိုတော့တယ်။ (၅၂)နှစ်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအိပ်မက်တစ်စကို အခုကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အင်္ဂလန်အသင်း ပြန်ရှာဖွေနိုင်မလား . . .
Photo:Fifa World Cup 2018,Sports Illustrated
(၅၂)နှဈကွာ မကျခှငျ့မရခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားအိပျမကျကို အင်ျဂလနျအသငျး ပွနျအသကျသှငျးနိုငျမလား
ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘိုးအလေို့ တငျစားခံထားရတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး ဘောလုံးဇာတျခုံပျေါမှာ အောငျပှဲနဲ့ ဝေးကှာနတော ဆယျစုနှဈတဈခုမက ကွာမွငျ့နပွေီ။ တိတိကကြပြွောရရငျ ၁၉၆၆ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလျစှဲပွီးကတညျးက အဓိက နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီးနှဈရပျဖွဈတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရိုပွိုငျပှဲတှမှော အင်ျဂလနျအသငျးက ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့သလောကျ ပွနျမပေးနိုငျခဲ့ဘူး။ ပွိုငျပှဲမတိုငျခငျ အမွဲလိုလိုဗိုလျစှဲဖို့ရပေနျးစားပမေယျ့ အဖြားရှုးသှားပွီး နာမညျကွီးထမငျးငတျအသငျးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို နှဈပေါငျးမြားစှာ ရငျနာနာနဲ့ ပိုငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး ဒီတဈကွိမျကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာတော့ သမိုငျးသဈတဈခုရေးထိုးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြရောငျခွညျသနျးနပွေီလို့ ဆိုရမယျ။
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ဆိုတာက ခွစှေမျးက အဓိကကတြယျဆိုပမေယျ့လညျး ကံတရား၊ ဗိုလျလုပှဲသှားရာလမျးကွောငျးခြောငျမှု စတဲ့အခကျြတှကေလညျး အရေးပါတယျဆိုတာ မထေ့ားလို့ မရဘူး။ အခု အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ခွစှေမျးက အကောငျးဆုံးအနအေထား မဟုတျပမေယျ့ အရငျ့အရငျအသငျးတှထေကျ Team Work ၊ Performance က တိုးတကျမှုရှိလာတယျလို့ ဆိုရမယျ။ ဗိုလျလုပှဲသှားရာလမျးကွောငျးကို ကွညျ့ရငျလညျး ကိုယျနဲ့ Level တူ အသငျးတှနေဲ့ ဗိုလျလုပှဲရောကျမှ ဆုံတှရေ့မယျဆိုတဲ့အခကျြကလညျး အားသာနတေယျ။ တဈခုပဲ။ ကံတရားက အင်ျဂလနျအသငျးဘကျမှာ ရှိလား၊ မရှိလားဆိုတာ။
ဒီလိုလမျးကွောငျး ခြောငျခဲ့တာကလညျး အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ပါးနပျမှုကွောငျ့ပါပဲ။ အုပျစုတှငျး (၂)ပှဲကစားပွီးခြိနျ အင်ျဂလနျနဲ့ ဘယျလျဂြီယံအသငျးတို့ အမှတျ၊ ရဂိုးပေးဂိုး အကုနျတူညီနတောကွောငျ့ သရကေမြယျဆိုရငျ Fair Play Points အရ အင်ျဂလနျ သခြောပေါကျ အုပျစုပထမရမှာ။ နောကျဆုံးပှဲမှာ ဘယျလျဂြီယံကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာက အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ ကောငျးဖို့ဖွဈသှားခဲ့ပွီး ဗိုလျလုပှဲအထိ လမျးကွောငျးခြောငျသှားခဲ့တယျ။ အခု ကှာတားဖိုငျနယျအဖွဈကစားမယျ့ ဆှီဒငျကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ရငျ ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ရုရှား-ခရိုအေးရှားတို့က တဈသငျးနဲ့တှမေ့ယျ၊ တကယျလို့ တခွားလမျးကွောငျးက ပွငျသဈ၊ ဘရာဇီးလျတို့သာ ခွခြေျောလကျခြျောဖွဈခဲ့ရငျ ဘယျလျဂြီယံ၊ ဥရုဂှေး ဘယျအသငျးကိုမဆို အင်ျဂလနျအသငျး ကောငျးကောငျးရငျဆိုငျနိုငျမယျ့အနအေထားပဲ။ သခြောတာကတော့ အင်ျဂလနျအသငျး ခနျြပီယံဖွဈဖို့ဆိုရငျ ကိုယျ့အလုပျကို ကိုယျအကောငျးဆုံးဖွဈအောငျလုပျပွနိုငျဖို့ရယျ၊ ကံတရားသာ လိုတော့တယျ။ (၅၂)နှဈကွာ ပြောကျဆုံးနခေဲ့ရတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအိပျမကျတဈစကို အခုကမ်ဘာ့ဖလားမှာ အင်ျဂလနျအသငျး ပွနျရှာဖှနေိုငျမလား . . .